Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Daalacanayo Hadda » Xagee ayuu Coronavirus ka yimid?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
CIA -da ayaa isku dayday waxayna soo laabatay iyadoo faaruq ah. Mareykanku wuxuu jeclaan lahaa inuu ku eedeeyo sheybaar Shiine ah inuu ka daatay, halka Shiinaha uu gadaal ka riixayo oo uu farta ku fiiqayo shaybaarka Mareykanka beddelkiisa.
CIA-da iyo wakaaladaha kale ee basaasnimada Mareykanka waxay ku soo noqdeen iyagoo faro madhan warbixintooda ku saabsan sida COVID-19 ku bilaabmay iyo xiriirka Shiinaha.
Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa lagu wargeliyay habeenimadii Talaadada natiijooyinka aan lagaran karin ee baaritaankan
Su'aashu waxay ahayd oo hadhay haddii Coronavirus -ku si dabiici ah u bilowday ama uu ka dhashay shil shaybaadh ama tijaabo.
Warbixinta CIA ee Shiinaha
Qiimayntan, oo uu amray Madaxweynaha Maraykanka Biden 90 maalmood ka hor, ayaa muujineysa caqabadda adag ee maamulku ka qabo in xog dheeri ah iyo iskaashi laga helo Dowladda Dhexe ee Shiinaha ee Beijing.
Madaxweynihii hore ee Trump ayaa wacay COVID-19 ee Shiinaha Virus.
Bilowga Virus -ka Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) wuxuu ku ammaanay Shiinaha jawaabta Coronavirus.
Shiinaha ayaa ka labalabeeyay inuu la wadaago diiwaannada shaybaarka, shaybaarka hidde -wadaha, iyo xog kale oo bixin kara iftiin dheeraad ah oo ku saabsan asalka fayraska, sida lagu sheegay maqaal ku saabsan warbixin cusub oo sirdoon oo maanta lagu daabacay Wargeyska Wall Street.
Gabagabadii ilaa hadda waa haddii Shiinuhu uusan siinayn marin u helidda xog gaar ah, runtu waligeed ma soo bixi doonto.
Joornaalka Wall Street Journal wuxuu daboolay raadinta adduunka ee jawaabaha, raadraaca Ururka Caafimaadka Adduunka, dhakhaatiirta iyo saynisyahannada Shiinaha iyo adduunka oo dhan, bulshada sirdoonka Mareykanka, iyo shabakadda ballaaran ee ku takhasusay cudurrada, dhammaantood waxay la halgamayaan inay isku daraan koox yaab leh tilmaamo kala duwan. Waa kuwan qaar ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah.
Baadhitaanka Wall Journal wuxuu ogaaday in Shiinuhu iska caabiyay cadaadiskii caalamiga ahaa ee baadhitaankii uu u arkay inuu yahay isku day lagu eedaynayo, dib -u -dhigay baadhitaankii muddo bilo ah, wuxuu xaqiijiyey xuquuqda diidmada qayaxan ee ka -qaybgalayaasha wuxuuna ku adkaystay in baaxaddiisu ay ku jirto waddamo kale.
Kooxda WHO ay hoggaamisay ee u safray Shiinaha horraantii 2021 si ay u baaraan asalka fayraska ayaa ku dhibtooday inay sawir cad ka helaan waxa cilmi-baaristii Shiinuhu horay u waday, waxay la kulantay caqabado intii ay ku jirtay booqashadeeda billaha ahayd, waxayna lahayd awood yar oo ay ku sameyso baaritaan dhammaystiran oo dhexdhexaad ah. iyada oo aan u ducayn dawladda Shiinaha. Warbixintoodii ugu dambeysay, baarayaashu waxay sheegeen in caddeyn aan ku filneyn ay la macno tahay inaysan weli xallin karin goorta, meesha, iyo sida fayrasku u faafay.
Warbixinnada warbaahinta saaxiibtinimo ee Shiinaha ayaa akhrinaya: Hay'adda Qaramada Midoobay Jimcihii la soo dhaafay waxay soo jeedisay wejigii labaad ee daraasadaha ku saabsan asalka coronavirus -ka gudaha Shiinaha waxaana loogu baaqay Shiinaha "Inay noqoto mid hufan oo furan oo iskaashi leh."
Ka dib markii cilmi-baarista wadajirka ah ee WHO iyo Shiinaha ay ku soo gabagabeeyeen inay waqti lumis tahay in la fiiriyo aragtidan dhammaadka ah bishii Maarso, Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu raacay madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump wuxuuna ku baaqay baaritaan kale oo lagu sameeyo shaybaarka noolaha ee Wuhan.
Laakiin qaar badan oo Biolabs -ka Mareykanka ah ayaa sidoo kale ka mid ah tuhmanayaasha daadinta, dad badan oo Shiine ah ayaa calaamad su’aal saaray Fort Detrick, oo ah shaybaar bioweapon -ka Mareykanka oo la sameeyay intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha ayaa Isniintii ugu baaqday Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) inay joogteeyaan mowqifkooda sayniska iyo xirfadeed ee raadinta asalka COVID-19 isla markaana ay si adag uga soo horjeedaan siyaasadeynta arrinta iyada oo loo diyaarinayo wajiga labaad ee daraasadda.
Hay'adda Qaramada Midoobay Jimcihii la soo dhaafay ayaa soo jeedisay wejigii labaad ee daraasadaha ku saabsan asalka coronavirus ee Shiinaha waxayna ugu baaqday Shiinaha "inay noqoto mid hufan oo furan oo iskaashi leh."
Soo jeedinta WHO waa mid aan waafaqsanayn mowqifka Shiinaha iyo dalal badan, afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha Zhao Lijian ayaa u sheegay shir jaraa'id oo maalinle ah.
Qorshaha wejiga xiga ee daraasadda asalka adduunka waa in ay hoggaamiyaan waddamada xubnaha ka ah sida lagu heshiiyay qaraarka 73 -aad ee Golaha Caafimaadka Adduunka, ayuu yiri Zhao.
"Waxaan rajeyneynaa in WHO iyo dowladaha xubnaha ka ah ay si ulakac ah u wada xiriiraan oo wada tashadaan oo si ballaaran u dhegeystaan ​​fikradaha iyo talooyinka dhinacyada oo dhan ayna hubiyaan in geeddi -socodka qoritaanka qorshaha shaqada uu yahay mid furan oo hufan," ayuu u sheegay wariyeyaasha, isagoo raaciyay soo jeedinta WHO ku saabsan daraasadda asalka waxaa baaraya khubaro Shiine ah.
Daraasadda asalka ahi waa arrin saynis ah waxayna u baahan tahay iskaashiga saynisyahannada adduunka oo dhan, ayuu yiri Zhao, isagoo dhaleeceynaya dhowr waddan, oo ay ku jiraan Mareykanka, siyaasadaynta fayraska.
Shiinuhu wuxuu eedda u rogay bartilmaameedka Maryland US Lab.
Galabnimadii Isniinta, in ka badan 750,000 oo muwaadiniin Shiine ah ayaa saxiixay warqad wada jir ah oo ay u direen WHO, iyagoo ka dalbanaya ururka inuu baaritaan ku sameeyo shaybaarka Mareykanka.
“Mareykanku waa inuu wajahaa codadka beesha caalamka oo ay ku jiraan dadka Shiinaha, oo uu bixiyo xisaab lagu qanco”, ayuu yiri Zhao.
Wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha ayaa marar badan ugu baaqday Washington inay ka jawaabto walaaca caalamiga ah ee ku saabsan sheybaarrada noolaha isla markaana ay ku casuuntay khubaro caalami ah ciiddeeda si ay u baaraan khatartooda.
Raadinta halka uu fayrasku ka yimid ayaa noqotay arrin diblomaasiyadeed oo kicisay xiriirka sii xumaanaya ee Shiinaha iyo Mareykanka iyo xulafooyin badan oo Mareykan ah. Mareykanka iyo kuwa kaleba waxay sheegaan in Shiinaha uusan si hufan uga hadlin wixii dhacay maalmihii hore ee masiibada. Shiinuhu wuxuu ku eedeeyaa dadka dhaleeceeya inay rabaan inay ku eedeeyaan masiibada oo ay siyaasadeeyaan arrin ay tahay in loo daayo saynisyahannada.
Waxay u egtahay in runta aysan waligeed soo bixi doonin, halka kumanaan ay maalin walba dhintaan sababtuna tahay wax kasta oo ku dhacay COVID-19.